DP World: Dhaawac weyn ayaa naga soo gaadhay xurguf iyo dagaalka dalka Jabuuti. – Xeernews24
DP World: Dhaawac weyn ayaa naga soo gaadhay xurguf iyo dagaalka dalka Jabuuti.
Guddoomiyaha DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem ayaa sheegay in shirkadda ay dhib kala kulmeysay inay lacag ka amaahato bankiyada tan iyo markii dowladda Jabuuti ay la wada wareegtay dekedda Dooraaleh oo ay shirko ku ahaayeen.
“Waxaan sameynnaa maal-gelin balse qiimo badan ayaa nooga baxaya. Taasi waa dhaawac” ayuu ku dhawaaqay Sultan Ahmed oo ku sugan magaalada Kigali ee dalka Rwanda, halkaasi oo shirkaddiisa ay 35 milyan oo doollaar ku mala-gelineyso xarun cusub oo ganacsi.
“Waxaa yaraaday bankiyadii lacagta na deemin jiray. Banki kasta oo lacag na deymin lahaa waxa uu leeyahya ‘ka waran haddii dalka aad maal-gashanaysaan uu idinku sameeyo sidda Jabuuti?’ oo kale marka Jabuuti waddo xun ayay noo furtay” ayuu raaciyey Sultan Ahmed bin Sulayem.
Dowladda Jabuuti ayaa dekedda Dooraaleh kala wareegtay DP World, oo wax ka maal-gashatay, bishii Febraayo ee 2018, sababo la xidhiidha muran soo socday ilaa 2012.
Jabuuti way ku gacan saydhay go’aanka maxkamadda magaalada London
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/02/dp-world.jpg 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-23 23:11:352019-10-23 23:11:35DP World: Dhaawac weyn ayaa naga soo gaadhay xurguf iyo dagaalka dalka Jabuuti.
Dr, Abiye Ahmed ka dib biladdi nabada iyo xaalka maanta! Dhulkaygii Waxa Loo Xayiray, Wiil Madaxwayne Muuse Biixi Abti U Yahay”Macalin...